अल्मोडालाई फेरि गीत चोरीको आरोप : बरिष्ठ गीतकार थापाले बौद्धिक सम्पत्ति चोरीमा कारबाही बढाउने चेतावनी - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
अल्मोडालाई फेरि गीत चोरीको आरोप : बरिष्ठ गीतकार थापाले बौद्धिक सम्पत्ति चोरीमा कारबाही बढाउने चेतावनी
२६ कार्तिक २०७४, आईतवार १८:३२ 7
सिनेमा ‘छक्का पञ्जा २’ मा समावेश ‘ए दाजु नसमाऊ नाडीमा’ बोलको गीतमा वास्तविक सर्जकको नाम नराखेर आफ्नो नाम राखेको भन्दै विवादमा आएका गायक गायक अल्मोडा राना उप्रेती फेरि विवादमा आएका छन् । शुक्रबार रिलिज भएको गीत राज्जा रानीको गीत चिपक चिपके बोलको गीत चोरेको आरोप उनलाई लागेको छ । ‘राज्जा रानी’को ‘चिपक चिपकके’ रिलिज हुनुभन्दा तीन घन्टा अगाडि सार्वजनिक भएको उनको गीत ‘दिलको भित्तैमा’लाई बरिष्ठ रचनाकार राजेन्द्र थापाले चोरीको आरोप लगाएका छन् । उनले ‘दिलको भित्तैमा’का केही भाग ‘चिपक चिपकके’सँग मिल्ने भन्दै अल्मोडाले गीत चोरेको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत दिएका छन् । ‘चिपक चिपकके’लाई राजेन्द्र थापाले लेखेका हुन् । राजेन्द्रले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, जहाँ गीत चोरी तहां किन अलमोडा रानाको नाम ?
मा राज्जारानीको गीत चिपक चिपक चिपककेको राज्जाजीको तस्बीर युट्युबमा रिलिज हुनु ठिक ३ घन्टा अघि अलमोडाले गाएको गीत कार्टुन क्र्युजको भिज्युयल मा ……
दिलको भित्तैमा दिलको भित्तैमा र कि देऊ माया सित्तैमार कि लिऊ माया सित्तैमार छ कि छैन मेरो पिक्चर दिलको भित्तैमार बोलको गीत रिलिज गरीयो ।
मिलन बिष्टले लेखेको वा चोरेको तथा अलमोडा, अन्जली र नवीन रावलले गाएको र अलमोडाको एरेन्जमेन्ट तथा नवीन रावलको सङ्गीतको यो गीतको हुक लाइन दिलको भित्तैमा सिधै चोरिएको हो । आधार यश प्रकार छन्ः
१. “राज्जाजीको (४) तस्बिर(३) दिलको भित्तामा (६)“ मा ४ र३र६ गरि १३ अक्षर जस्तै तेस्मा नि समान मिटर ४ र३र६ . १३ र मात्रा “छ कि छैन(४) ( मेरो) पिक्चर(३) दिलको भित्तैमा(६)“ लिएर बिचमा “मेरो“ ( २मात्राको) शब्द थपी र लास्टमा भित्तालाई भित्तै गरि अलग बनाउने कोसिस गरे पनि जान्नेले चोरेको बुझीहाल्छ । लौ पिक्चर दिलको भित्तामा त आफै आयो रे गीतकारलाई । तर मात्रा र शैली तथा मिटर राज्जाजिको तस्बीर सङ्ग ( छ कि छैन पिक्चर) हुबहु कसरी ? यति धेरै त मिल्दैन ।
२. ८र१० महिनाअघी हाम्रो गीत रेकर्डिङ गरिएको कृपा स्टुडियोमा नै अलमोडाका सबैजसो काम र बसाई हुने गर्छ । र यो दोस्रो गीत नि कृपा स्टुडियोमै अलमोडाकै भाई अनुप राना ले रेकर्डिङ गरेका हुन् । बुझ्दा यो गीत भर्खर करिब डेढ महिना जत्ति अघी अलमोडाको मेन भोकलमा उन्का भाई अनुपले रेकर्ड गरेका रहेछन् ।
३, मिलन बिष्टले आफै स्टुडियोमा सुनेर चोरे या अलमोडा या अलमोडाका भाई तेहींको रेकर्डिस्ट अनुपराना या अन्य स्टाफले सुनाए ? चोरी स्टुडियो बाटै भयो ?
४, यस्मा अलमोडा कसरी संलग्न ? कि उन्लाई थाहै नदिई नबिनले चोरेका कि नबिनलाई चोराउन लगाईयो कसैले ? बिगतमा नि पानी पर्यो देखि नाइलनको सारीसम्म कपी क्याट मा परिरहेका अलमोडा यसमा नि नाम जोरिन पुग्नु संजोग त ?
५, गायक भए पनि अलमोडा मात्रै यश टिमका सलेब्रेटी भएकाले उसैले जबाफ दिनु पर्छ । किन राज्जारानी भन्दा घ घन्टा अघि हतार हतार निकालिएको ? सन्जोग कि चोरी आरोप नलागोस भनेर ? तेस्को मतलब संलग्न सबै यश बारे जानकार रहेछन् ।
कृपा स्टुडियो का ब्यबस्थापनले आफ्नो स्टुडियोमा गरिएको गीतको चोरी बारे कुन कर्मचारीले अलमोडा या नवीन , कल्लाई सुनायो छानबिन गरि सार्बजनिक हुनु नैतिक र ब्यबसायिक दायित्व हो ।
साथै रेपुटेड कार्टुन क्रयुजले नि यस्तो चोरी गीतमा परफर्म गर्नबाट बच्नु पर्छ । चोरी भनेको चोरी नै हुन्छ झन बौद्धिक चोरी त अक्षम्य मान्नु पर्छ कार्टुन समुहले । भोलि आफ्नै कन्सेप्ट चोरदेलान् यिनै चोरले ।
तत्कालै उक्त गीतबाट दिलको भित्तैमा शब्द हटाई अर्को हाल्न सचेत गराउंदछु । मनको आंखामा र तिम्रो मुटुमा आदि समान मिटरका हाल्न सकिन्छ । अन्यथा युट्युब, कृपा स्टुडियो , अलमोडा र गीतकार आदीका बिरुद्ध बौद्धिक सम्पत्ति चोरीमा कारबाही बढाइने छ ।
दुई वर्षमा मैले धेरै कुराहरु स्थापित गरे अब बाँकि काम पुरा गर्छु — मिलन मोक्तान अध्यक्ष नेपाल सांगीतिक संघ